सुन अझै महङ्गो हुने यस्ता छन् ४ कारण
काठमाण्डौ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको राजनीतिक वातावरण बिग्रिएका कारण विगत एक महिनाको अवधिमा सुनको मूल्य घरेलु बजारमा प्रति तोलामा १९ सय रुपैयाँले बढिसकेको छ । साउन १ गते प्रति तोला ५३ हजार ५ सय रहेको सुनको मूल्य ५५ हजार ४ सयको उचाई छोएर बुधबार ५५ हजारमा कारोबार भयो । यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य ४ महिनाकै उच्च विन्दूमा...
उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीच तनाव बढ्दा सुन सञ्चित गर्ने मालामाल, भाउ अझै बढ्नसक्ने
काठमाण्डौ । अमेरिका र उत्तर कोरियाबीच बढ्दो तनावका कारण सुनको भाउ उच्च दरले बढ्न थालेको छ । यी दुुई देशबीचको तनावले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रको राजनीतिक वातावरण बिग्रिएको र यसको प्रभाव व्यापारका विविध क्षेत्रमा समेत परेपछि सेयर, डलर लगायतमा लगानी गर्नेहरु सुनतर्फ आकर्षित हुँदा माग बढी मूल्य उच्च दरले बढ्न थालेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी...
सुन खरीद गर्दा यी ६ गल्ती नगर्नू, लगानी डूब्ला नि !
काठमाण्डौ । सुन खरीदको खुशी तथा उत्साहमा हामी साना–साना गल्ती गर्छौ र पछि पछुताउँछौ । त्यसो भने आउनुहोस् ती गल्तीहरुको बिषयमा चर्चा गरौं, ताकि समयमै यस्तो गल्तीबाट बच्न सकियोस् । १. सुनको सिक्का गलत समयमा खरीद गर्नु सुनको सिक्का खरीद गर्नुको तपाईको मुख्य उद्देश्य सिधा रुपमा लगानीसँग जोडिएको हुन्छ । आफूले कमाएको पैसा सुनको सिक्का...
सेयरमै सती जाने कि सुन किन्ने ? ६० हजार पुग्दैछ भाउ !
काठमाण्डौ । सेयर बजारमा लगानी गर्ने सोंच राखिरहनुुभएको छ भने यो बेला उपयुक्त समय होइन । अहिले सेयर बजारमा नयाँ लगानी गर्नु भनेको जानी–जानी भड्खालोमा पर्नुजस्तै भएको छ । सेयर बाहेक लगानीको अन्य विकल्पको बिषयमा सोचिरहनुुभएको छ भने तपाईका लागि सुनमा लगानीले उभो लगाउनसक्छ । अन्तराष्ट्रिय घटनाक्रमहरुका कारण सुनको मूल्य प्रभावित हुने...
यसकारण बढ्दैछ सुनको भाउ, बैंकहरुले अब १ केजी भन्दा थोरै सुन पनि बिक्री गर्नुपर्ने
काठमाण्डौ । अमेरिकी डलरको भाउ बढेपछि सुनको भाउमा गिरावट आउने प्रवृति भन्दा ठीक उल्टो गतिमा अहिले सुनको भाउ बढिरहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको उदयसँगै अमेरिकी डलर बलियो हुँदा सुनको भाउमा निरन्तर पहिरो गइरहेको थियो । नेपाली बजारमा समेत डलरको भाउ बढेपछि पुस ७ गतेसम्म सुन प्रति तोला ५१ हजार ८ सयमा कारोबार भएको थियो । त्यसपछि...
काठमाण्डौ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सुन तस्करीमा ठूला माछाहरु रहेको र आफूहरुचाहिँ भुरामात्रै भएको बताएका छन्। ‘केही दिनअघिको सुन तस्करीबारे कुरा आ’छ, सुन्नभा होला’, महराले भने, ‘मेरो नामै सुन तस्करीमा जोडेर आछ। जुन सुन तस्करी अहिले मैले सबै डिटेलमा भन्न चाहदिनँ, धेरै ठूला माछाहरु छन् यसमा। त्यो समय क्रममा...
अवैध सुन : भारतीयले लगानी गर्छन, नेपालीले व्यवस्थापन
काठमाण्डौ । भरतमा पुराना नोटको कारोबार बन्द भएयता नेपालमा सुन तस्करी बढेको तथ्य बाहिर आएको छ । साथै विभिन्न देशबाट नेपाल भित्रने सुन ग्राहकमार्फत भारतीय बजार पुग्ने पनि प्रहरी अनुसन्धानले खुलाएको छ । भारतमा हजार र पाँच सय दरका नोट प्रचलन रोकिएसँगै अवैध सुन प्रतिकिलो पुरानो मूल्यभन्दा ५ देखि ७ लाखसम्म महँगोमा बिक्री हुने गरेको तथ्यले...
डलर बढे पनि सुनको मूल्य उकालो
काठमाण्डौ । गत बर्ष भएको ८ प्रतिशतको वृद्धि पछि चालू बर्षमा पनि सुनको मूल्य उकालो लाग्न थालेको छ । सामान्यतः अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दा सुनको मूल्य ओरालो लाग्ने प्रवृत्ति छ, तर मंगलबारको कारोबारमा त्यसविपरीत सुनको मूल्य उकालो लागेको खबर आजको कारोबारमा छ । खुद्रा सुनको मूल्यमा ०.४ प्रतिशतले बृद्धि भई प्रतिऔंश १ हजार १५६.७५ डलर कायम भएको छ...
आउँदो दशैंसम्म सुनको भाउ ६० हजार पुुग्नसक्ने !
काठमाण्डौ । भाउ घटेको बेला अत्तालिएर सुन बिक्री गर्ने हतारो पो गरिरहनुुभएको छ कि ? छ भने एकछिन पख्नुहोस्, अन्तराष्टिय क्षेत्रका बजार विश्लेषकहरुले अंग्रेजी नयाँ वर्षको सुरुवातका केही महिनासम्म सुनको भाउ घटे पनि त्यसपछि भने बुल भई ऐतिहासिक उचाईमा पुुग्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । नेपालमा सुनको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने उतारचढावले...
सुनसँगै चाँदीको मूल्यमा पनि पहिरो, ब्याजदर वृद्धिको प्रभाव
काठमाण्डौ । अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकको बहुुप्रतिक्षित बैठकले बिहीबार ब्याजदर वृद्धिको निर्णय गरेसँगै सुनको भाउमा झनै ठूलो पहिरो गएको छ । सुनसँगै शुक्रबार चाँदीको मूल्यमा पनि पहिरो गएको देखिएको छ । अमेरिकी अर्थतन्त्र सवल बन्दै गएको भन्दै त्यहाँ ब्याजदर वृद्धिको निर्णय भएसँगै डलरको मजबुुती बढेको र यसले सुुनको भाउको मूूल्य...
सुन ११ महिनाकै सस्तो, ५० हजार तल झर्नसक्ने !
काठमाण्डौ । पहेँलो धातुु सुुनको मूल्य ओरालो लाग्ने क्रम रोकिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्य घटिरहँदा त्यसको प्रभाव घरेलु मार्केटमा परेको हो । यही प्रभावका कारण विवाहको मुख्य सिजनमा सुनको मूल्य ११ महिनाकै सस्तो भएको छ । आइतबार सुनको मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रति तोलामा ४ सय रुपैयाँले घटी ५२ हजार ६ सयको विन्दूमा झरेको हो...
विवाहको सिजनमै सुन अभाव
काठमाण्डौ । विवाहको मुख्य सिजनमा नेपलाी बजारमा सुनको अभाव देखिएको छ। केही समययता सुनको मूल्य घट्दै गएको छ भने बजारमा माग पनि उच्च छ । बिहेको सिजनमा सुनको माग प्रायः उच्च रहने गरेको छ । लगातार मूल्यमा आएको कमीले बजारमा सुनको माग बढ्दै ग्ए पनि सोही अनुपातमा आपूर्ति नहुँदा अभाव भएको व्यवसायीको भनाई छ । “सामान्य अवस्थामा बजारमा दैनिक १५...
'लगानीको स्वर्ग'मा खतराको घण्टी ! सुन अझै सस्तिने
काठमाण्डौ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग भन्दा आपूर्ति बढी भएपछि र अमेरिकी डलर लगातार मजबुत बन्दै गएपछि केही साताअघि मात्रै ५९ हजारको उचाईमा पुुगेको सुनको भाउ ९ महिनाकै सबैभन्दा न्यून विन्दूमा झरेको छ । सोमबार सुनको भाउ प्रति तोलामा २ सय रुपैयाँले घटेर ५३ हजार ८ सय कायम भएको हो । यसअघि मंसिर १६ गते सुन तोलाको ५४ हजारमा झरेको थियो । यो...
सुनको मूल्य वर्षकै न्यून विन्दूूमा, यसकारण अझै घट्नसक्छ
काठमाण्डौ । अमेरिकी डलर मजबुत बन्दै जाँदा नेपालमा सुनको मूल्य यो वर्षकै न्यून विन्दूमा झरेको छ । २०७३ सालको ८ महिने अवधिकै सबैभन्दा न्यून बिन्दूू प्रति तोला ५४ हजार रुपैयाँमा सुन कारोबार हुन थालेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार छापावाल सुन प्रति तोला ५४ हजारमा कारोबार भइरहेको छ । बुधबारको तुलनामा बिहीबार...